नेपालदृष्टि । मभित्र मच्चिरहेको द्वन्दको लिङ्गे पिङ कसले देख्ने ! मभित्र निरन्तर गइरहेको पहिरो कसले बुझ्ने ! त्यसलाई न कसैको सामु देखाउन सक्छु, न त भन्न नै सक्छु । म कुन मानसिक अवसादबाट गुज्रिरहेछु भन्ने कुराबाट बेखबर मेरा परिवारले मेरो विवाहको लागि दबाव दिइरहेका छन् र केटीका फोटोहरु हेर्न कर गरिरहेका छन् ।
हुन पनि विवाहयोग्य लक्का जवान छोरो, त्यसमाथि पनि हामी राजपुतहरु विवाहलाई समेत आफ्नो आन, वान र शान सम्झिने हाम्रो समुदाय । म हेर्दामा पनि निकै ह्यान्डसम देखिन्छु । त्यसमा पनि धनी बावुको एक्लो छोरो पढाइमा पनि उतिकै तेज । कुनै पनि बाबुआमाले आफ्नी छोरीका लागि छान्ने वरको क्राइटेरियाभन्दा धेरै माथि देखिने मेरो व्यक्तित्व । अथवा यसो भनौं, कुनै पनि युवतीले प्रायः सोच्ने सपनाको राजकुमार । टल’ डार्क’ ह्यान्डसममाथि पनि सम्पन्न घरको एक्लो वारिस । तर अफसोच १ बाहिरी रुपमा हेर्दा म जेजस्तो देखिन्छु त्यसको ठीक विपरीत छ मभित्रको व्यक्ति जोसँग मबाहेक अरु कोही दोस्रो व्यक्ति परिचित छैन । मलाई जन्म दिने मेरी जननीसमेत अनभिज्ञ हुनुहुन्छ मभित्रको व्यक्तिसँग भने अरुको त झन् के कुरा भो र !
आज घरमा चहलपहल चर्कै छ । मेरा लागि भनेर ल्याइएका विवाहयोग्य कन्याका एक से एक सुन्दर फोटो छान्न जुटिरहेका छन् मेरा दिदीहरु । दिदीहरु एकएकको फोटो हेर्दै टीका–टिप्पणीका पर्रा छाडेर हाँस्दै पनि छन् भने मेरा बुबा र आमा गर्वले छाती चौडा पार्दै छोरीहरुले गरेका टीका–टिप्पणीमा होमा हो मिलाउँदै हुनुहुन्छ । तर बिचराहरुलाई के थाहा, मेरो संसार भने नितान्त बेग्लै छ भन्ने कुरा ! जतिजति उहाँहरु खुसी हुँदै कन्या छान्न तल्लीन हुनुहुन्छस उतिउति म झन् भित्रभित्रै पीडाले आहत भएर छटपटाइरहन्छु, दुःखको अथाह सागरमा हेलिइरहन्छु । जति प्रयत्न गर्दा पनि त्यो खुसीमा सामेल हुन सक्दिनँ ।
— ‘हैनहैन... यहाँले सही नै सुन्नुभएको हो ! हो, केटी साथी नभएर केटा नै साथी हो, जसबिना म आफूलाई अपूरो र अधुरो सम्झन्छु । ऊबिना म बाँच्नै सक्दिनँ ! अथवा यसो भनौ हामी दुबै एकअर्काबिना बाँच्ने
कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौं । त्यसैले त आग्रह गर्दछु यो विवाहलाई तपाईं अस्वीकार गर्नुहोस् भनेर ।’
आजदेखि १५ जिल्लामा लकडाउन, के खुल्ने-नखुल्ने
अब संसद ब्यूत्याउँन सवै दलका नेता एक जुट
हाटमानै सिमित इटहरा बजार (भिडियो सहित)